Nifindra any amin’iry mpivoy bisikileta malagasy avy any Antsirabe iry indray izany ny akanjobà mavo.
Efa tany amin’ny mpihazakazaka fahadimy tonga tao Sakaraha vao hita io teratany frantsay io ary mbola tafiditra teo alohany i Jean de Dieu Rakotondrasoa na Ravoatabia, izay efa nahazo andriany roa tamin’ny "Tour Cycliste International de Madagascar" (TCIM).
Teny amin’ny kilaometatra faha-18 no nanomboka nitsoaka i Lanto Bulldozer, izay nanararaotra ny fisahotahana kely teo amin’ireo ekipam-pirenena malagasy sy ireo ekipa frantsay. Nifandimby nitarika hatrany am-piandohana ireo tarika roa ireo tamin’izany. Teo dia efa nahatratra 8 minitra ny elenalena nisy teo aminy sy ny andiam-bisikileta nitarika ny hazakazaka.
"Efa hotazoniko hatramin’ny farany ity akanjobà mavo ity satria efa tao anatin’ny telo volana aho no nanao fanazarantena taty Fianarantsoa sy Morondava ary Antsirabe. Toy izany ihany koa ny tao Antananarivo", hoy i Lantonirina Manjakazafy, izay nisalotra fanamiana valo tamin’ireo nozaraina tao amin’ity dingana omaly ity.
Dingana roa lavalava avokoa no hotontosaina anio sy rahampitso. Hirefy 122 km ny halaviran’i Ranohitra mihazo an’Ihosy, izay hifanenjehan’izy ireo anio manomboka amin’ny 1 ora tolakandro. Rahampitso kosa dia hisy fihodinana ny tanànan’Ambalavao mirefy 25 km mialoha ny handehanana any Fianarantsoa amin’ny halaviran-dàlana 50 km.
Dina Razafimahatratra & Roméo Andriamihaja